Ny tambajotra tena izy dia; ezaka maharitra mba hananganana ny isan'ireo olona fantatrao & izay mahafantatra anao, tsy ampy ny mahalala fotsiny ny olona. Mila mahafantatra ny zavatra ataony sy ny fomba ahafahan'izy ireo manampy anao hahatratra ny tanjonao ianao, izany dia mety amin'ny alalan'ny fanohanana ara-moraly na fampidirana anao any amin'ny mpampiasa vola tsy fantatrao raha tsy manao ezaka ianao hanokatra fifandraisana vaovao.
Mila manapa-kevitra ianao hoe inona no karazana olona ilainao mba hihaonana, izay tokony ho fantatrao. Tsy maintsy manangana lisitr'ireo tanjona sy hevitra mikasika ny fomba ahafahanao mihaona amin'izy ireo. Manomboka amin'ny tambajotra efa misy anao, dia efa ho iray na maromaro ianao, ary aza manakarena na oviana na oviana ny fifandraisana misy anao. Soraty ny olona rehetra fantatrao, eny fa na dia ny fianakaviana sy ny olona tsy ao amin'ny faritra misy anao aza, dia ambarao ny fomba fifandraisan'izy ireo sy ny mety ho fantany izay afaka hanampy anao.
Miresaha amin'ny fifandraisana eo aminao ary lazao azy ireo ny zavatra ataonao na ny fikasana hataonao, anontanio izy ireo raha mahafantatra olona afaka manampy anao izy ireo mba hahafahan'izy ireo mampiditra anao. Jereo ny zava-misy rehetra ao an-toerana, tsy mampaninona na fampisehoana fiantrana na trano fisakafoanana amin'ny varotra ao an-toerana izany, ny fahafahana rehetra hivoaka sy hihaona amin'ireo olona vaovao dia tokony ho takarina.
Rehefa mivoaka ianao ary manao fanamarihana rehefa nihaona tamin'ny olona ianao, dia afaka manoratra eny ambadiky ny karatrao na mandray taratasy na padanao miaraka aminao, rehefa miresaka ianao dia hilaza ny zavatra azonao ampiasaina, olon-kafa fantany, hafa zavatra, zavatra tiany na ataony ho an'ny velona. Manaova fanamarihana raha vao afaka manao izany ianao satria ny ampitso dia mety ho hadinonao ny ankamaroan'ny zavatra nolazainy.
Tsy hahita tolotra maro mitoetra ao an-trano ianao, mila miaraka amin'ny olona ianao, manandrana manasa olona ho an'ny kafe na zavatra matanjaka, mitazona ny hafanana sy ny mahafinaritra, miezaha tsy hijanona fotsiny hoe 'fivarotana'. Ny olona tia ny olona izay mamorona rivotra tsara, raha mihevitra izy ireo fa manasa azy ireo fotsiny mba hahazoana zavatra avy amin'izy ireo dia tsy ho lasa ampahany tsy tapaka ao amin'ny tambajotra.
Ambonin'ny zava-drehetra dia mitazona firaketana marina momba ny tambajotra misy anao, mitazà izany hatrany isan'andro, avereno jerena ny lisitr'ireo olona tsy tapaka ary mifandray hatrany na dia misy (manontany tena) aza raha manontany tena izy ireo. Manolora tena hanao tombontsoa kely raha afaka manao izany ianao satria izany dia hisoroka ny mety hisian'ny 'mpampiasa'. Jereo ny tambajotra amin'ny maha-ampaham-potoana isan'andro ny anjara asan'ny raharaham-barotra.
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny tambajotra dia mahazo dika mitovy amin'ity eBook free ity - tsindrio ity rohy ity; http://www.carlhenryproperty.com/files/160816_CARL-HENRY-Networking-Skills-Build-your-Business-and-Wealth.pdf